Fahasalamana - Pejy fandokoana ho an'ny ankizy
Ny mamy sy ny nibble dia malaza amin'ny ankizy. Saingy, noho ny siramamy sy ny tavy avo be indraindray, ny fihinanana (indrindra ny fihoaram-pefy) dia mety hitarika olana ara-pahasalamana haingana. Voalaza matetika fa ny faniriana sakafo matavy sy mamy dia voajanahary. Izy io dia avy amin'ny fotoana niankina tamin'ny fahaveloman'ny olona ny fihinanana sakafo be kaloria.
Snacking ho an'ny ankizy: ny fampiasana zava-mamy amin'ny antonony
Na inona na inona fahamarinana misy ao amin'io fiheverana io dia zava-dehibe ny hampianaran'ny ray aman-dreny ny zanany hampiasa zava-mamy sy nibble amin'ny fomba voafaritra sy mandanjalanja hatramin'ny voalohany.
Rehefa misakafo tsakitsaky dia tsy maintsy manome ohatra ny olon-dehibe © Grischa Georgiew / Adobe Stock
Amin'izany fomba izany dia azo sorohina eo am-piandohana ny aretina misakafo sy ny hatavezina. Any Alemana sy ny firenena indostrialy hafa rehetra dia tsy olana ny famatsian-tsakafo tena ilaina ary noho izany ny fihinanana sakafo mamy na masira na sakafo misy matsiro matanjaka kokoa dia tsy ilaina.
Fiaraha-miasa amin'ny sakafo mamy, masira ary matavy
Raha ny teôria, ny zava-mamy sy ny tsakitsaky dia azo atao amin'ny menio ho an'ny ankizy isan'andro. Na izany aza, misy zavatra vitsivitsy tokony hodinihina. Amin'ny ankapobeny, ny ray aman-dreny dia tokony "hampianatra" ny zanany fa ny sakafo mamy, masira ary matavy toy ny vatomamy, chips & Co. dia zavatra manokana. "Snacking - inona ary ohatrinona no avela?" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 10. September 2021 10. September 2021 Sokajy mihinana sy misotro, fahasalamanaKeywords nibble, Mamy, zava-mamy, aza mihinana zava-mamy, Sugar amin'ny sakafo, Votoatin'ny siramamyFanamarihana 1 misakafo kely - inona ary ohatrinona no avela?
Fanatanjahan-tena bebe kokoa ho an'ny zanatsika
Tia ny hetsika ny zaza satria izy io dia fanehoana ny joie de vivre. Carefree dia mihazakazaka, mizaha, mihanika. Ambonin'ny zava-drehetra, ny fihetseham-po dia maneho amin'ny alàlan'ny hetsika. Ao anatin'ny taona vitsivitsy dia manapa-kevitra ny ray aman-dreny hoe hatraiza ary amin'ny tontolo iainana no afaka mamaly ny filan'izy ireo voajanahary. Fa inona no mitranga rehefa tsy mihetsika ny ankizy?
Fanatanjahan-tena ho an'ny zanatsika
Ny tsy fahampian'ny fampihetseham-batana dia resahina amin'ny haino aman-jery sa ny fampitam-baovao mihitsy aza? Ny fiterahana dia mipoitra avy amin'ny fihinanana angovo be loatra avy amin'ny sakafo na avy amin'ny fanjifana angovo tsy ampy.
Fanatanjahan-tena bebe kokoa ho an'ny zanatsika - Sary avy amin'ny Pixabay
Ny ankizy eo anelanelan'ny enina ka hatramin'ny folo taona dia tsy manao afa-tsy adiny iray isan'andro isan'andro. Mandritra ny fotoana fialan-tsasatra, ny fifantohana dia ny fifampiraharahana amin'ny haino aman-jery elektronika, ao anatin'izany ny andiana streaming. Mampiseho amintsika ny fandinihana fa manomboka mianatra ireo ankizy tsy dia tsara ny fihetsika. Izay mijaly noho ny hatavezina sy ny lamosina amin'ny fahazazany dia tena azo inoana fa tsy maintsy atao amin'izy ireo rehefa lehibe.
Izay ilain'ny vatana
Etsy andaniny, ny fampihetseham-batana dia mampihena ny adin-tsaina izay lanin'ny ankizy any an-tsekoly, mandritra ny fifandirana na amin'ny alàlan'ny fanjifana haino aman-jery. Mampitombo ny tosidra ny fihenjanana, izay azo ahena amin'ny alàlan'ny fanatanjahan-tena tsy tapaka. Matetika ny ankizy tsy ampy fanatanjahan-tena sy ny tsy fisian'ny oksizena vokarina dia sokajina amin'ny fomba diso ho hyperactive, fa ny fomba izay ilaina amin'ny fivelomana fotsiny izy ireo amin'izao fotoana izao.
Raha ampiasaina tsy tapaka ny hozatra, dia mihetsika ny sela miaro mahery ao amin'ny vatana izay manatanjaka ny hery fiarovan'ny vatana. Ny fikorianan'ny ra tsara ao amin'ny ati-doha dia mampiroborobo ny fahaizana mifantoka.
Ambonin'ny zava-drehetra, zava-dehibe ho an'ny ankizy ny fampandrosoana maimaim-poana sy ny fitrandrahana maimaimpoana amin'ny natiora, noho izany dia lasa mahaleo tena izy ireo, mamorona ary afaka mampifanaraka tsara ny tenany. Lasa matoky tena ny ankizy rehefa mahazo aina amin'ny manodidina azy sy amin'ny vatany ary matoky tena fa handeha amin'ny làlan-kalehany. "Fanatanjahan-tena bebe kokoa ho an'ny zanatsika" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 5. September 2021 5. September 2021 Sokajy Fampianarana, akaninjaza & sekoly, fahasalamanaKeywords Hetsika isan'andro, mihetsika, Fomba fiaina mipetrapetraka, fialam-boly, ankizy, hanao fanatanjahan-tena bebe kokoa, miaina natioraLeave a Comment fanatanjahan-tena be loatra ho an'ny zanatsika
Corona dia toe-javatra tsy manam-paharoa ho an'izao tontolo izao, ary noho izany dia manam-pahaizana manokana ho an'ny Alemanina izay tia dia lavitra koa. Betsaka no tsy afaka mieritreritra ny handany ny fialan-tsasatra fanaony isan-taona raha tsy manao dia lavitra. Saingy tsy azo natao tampoka izany tamin'ny taona lasa - ary mandra-pahatongan'izany dia tsy azo heverina izany.
Mandehandeha amin'ny fotoana Corona
Efa amam-bolana maro izao ny areti-mandringana ary - olombelona tanteraka izany - tsy ny olona rehetra no mitovy hevitra amin'ny momba an'io.
Mandehandeha amin'ny mariky ny areti-mifindra corona - © JenkoAtaman / Adobe Stock
Na dia misy aza ny fihetsiky ny vaovao amin'ny tahotra sy fitandremana fatratra, ny sasany kosa tsy miraharaha izany ary tsy manaraka ny fepetra voatondro toy ny fitazonana ny halaviranao na ny fitsipika mifehy ny fahadiovana sasantsasany. Ny fitsangatsanganana voaomana dia mitovy amin'ny fomba hafa.
Ny tsirairay izao dia tsy maintsy manapa-kevitra samirery raha miaro ny tenany sy ny fianakaviany ary raha azo atao koa izany rehefa mandeha vakansy.
Tsy anjarantsika ny mitsara. Fa indrindra rehefa mandeha na manidina any ivelany dia ilaina ny fitandremana sy ny fahalalana marina satria tsy mihatra amin'ny firenen-kafa ny lalàna mifehy ny areti-mandringana Alemanina. Na dia amin'ny firenena iray aza, dia tsy miova ny lalàna, na aiza na aiza - tsy maintsy atao ny faritra sasany na misy fepetra hentitra kokoa. Ny fampahalalana marim-pototra dia takiana eto mba tsy hahatonga anao ho tompon'andraikitra amin'ny fanenjehana na hanimba tena tsy amin'antony. "Fialan-tsasatra amin'ny fotoanan'ny Corona - fa mitandrema kosa!" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 23. Jolay 2021 5. September 2021 Sokajy Fialan-tsasatra, fitsangatsanganana ary fialan-tsasatra, fahasalamanaKeywords lisitra, Corona, Coronavirus, Covidien, COVID-19, Dia lavitra, areti-mifindra, Famerana ny fivezivezena, Lisitry ny fizahantany, Tsangatsangana, fialan-tsasatra, VerreisenLeave a Comment mba hiala sasatra amin'ny fotoanan'ny Corona - nefa mitandrema!
Ny sasany maniry mafy azy ireo isan-taona, fa ny hafa kosa mampihoron-koditra - ny maripana midsummer. Na izany na tsy izany dia zava-dehibe indrindra ny fiarovana ny zazakely sy ny zazakely amin'ny hafanana.
Ny zaza madinidinika dia manana velaran-tany ambonimbony kokoa noho ny habetsaky ny vatany. Vokatr'izany dia mifoka hafanana bebe kokoa ny vatana ary mitahiry azy. Raha miakatra haingana be ny maripanan'ny vatana dia mety tsy hahomby ny rafitra fanamainana voajanahary. Ny etona dia azo ahena ihany koa amin'ny hamandoana avo, ka hitranga ny fananganana hafanana mampidi-doza. "Arovy ny zaza sy ny zaza amin'ny hafanana | Mitso-drano anao" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 22. Jolay 2021 5. September 2021 Sokajy fahasalamanaKeywords milamina, hafanana, Schutz, masoandro, suntan fanosotra, Fiarovana amin'ny masoandroLeave a Comment hiarovana ny zaza sy ny zaza amin'ny hafanana | Mitso-drano anao
Fandrika sakafo - mampihena lanja
Ny olon-drehetra dia nanandrana sakafo tamin'ny fotoana sasany, na dia tsy nantsoina hoe aza izany. Avy eo ianao dia mety efa nanandrana nanary lanja tamin'ny fihinanana kely kokoa na fanaovana fanatanjahan-tena bebe kokoa na latsaka. Saingy tsy dia nisy vokany. Angamba izany dia noho ireo fandrika fihinana mahazatra nefa miafina ireo.
Fandrika fihinanana sakafo mahazatra amin'ny fahaverezan'ny lanja
Ny fandrika lasopy
Matetika ny olona iray dia mihevitra fa ny lasopy ankafizinina amin'ny fanombohana dia misy vokany mahavoky ary avy eo ny iray tsy mandany be intsony mandritra ny sakafo lehibe. Tsy marina izany. Ny kibo dia mamela ny lasopy handalo haingana ary aorian'izay dia hihalehibe kokoa aza ny vokatry ny hanoanana. Ny lasopy ho enti-mampihena ny lanjany dia tsy mety. Ny sakafo voarindra miaraka amin'ny lasopy laisoa dia miavaka amin'izany.
Fandrika fihinanana sakafo mahazatra rehefa mihena ny lanjany - © Dan Race / Adobe Stock
Ilay fandrika legioma
Iaraha-mahalala fa mahasalama ny legioma ary manampy betsaka amin'ny sakafo sahanina rehetra. Ny vato misakana iray anefa dia ny legioma matetika andrahoina amin'ny dibera na saosy krema. Amin'ny tranga toy izany, ny legioma dia raisina ho fitsikerana toy ny hamburger na sakafo matavy mitovy.
Ny fandrika salady
Ny salady dia misy fitafiana ihany koa ary mitondra antsika amin'ny iray amin'ireo fandrika fihinana malaza indrindra. Satria eo no manomboka ny olana amin'ny salady heverina fa mampihena ny lanjany. Ny fitafiana yaourt, ohatra, dia misy tavy sy kaloria betsaka ka tsy ahena toy izao ny lanja. Ny fiomanana amin'ny yaourt voajanahary na quark ambany-tavy dia atolotra eto.
Fandrika fisotroana maivana
Izay mino fa ny fihenan-danja amin'ny alàlan'ny fihinanana zava-pisotro maivana dia miasa satria tsy misy kaloria sy siramamy kely kokoa ao aminy dia tokony hampianarina tsara kokoa. Na eo aza ny fihenana, dia mbola be dia be ao anatin'ireny zava-pisotro ireny ka tsy afaka hihena intsony ny lanjany. Safidy mahasalama ho an'ny zava-pisotro dia rano mineraly misy voasarimakirana na voasary vao voahidy. Tsara ny tsirony, mahasalama ary manampy rehefa manomboka sakafo.
Ny fandrika laxative "Milatsaka ny sakafo - Mihena ny lanja" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 5. Jona 2021 5. September 2021 Sokajy mihinana sy misotro, fahasalamanaKeywords mihena, mampihena lanja maharitra, sakafo, Fandrika sakafoLeave a Comment amin'ny sakafo fandrika - very lanja